अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिताका विजयीलाई प्रमाणपत्र प्रदान…. – HTV Khabar
अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिताका विजयीलाई प्रमाणपत्र प्रदान….
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) ले अनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता २०२० का विजयीहरुलाई ट्रफि तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। इनास नेपाल च्याप्टरको समन्वयमा इनास ग्लोबलले शनिवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा ट्रफि तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा इनास ग्लोबलका अध्यक्ष कमला दाहाल, इनास नेपाल च्याप्टरका सल्लाहकार तथा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकास अधिकारी, इनास ग्लोबलका उपाध्यक्ष अर्जुन काफ्ले, सल्लाहकार लक्ष्मण लम्साल र इनास नेपाल च्याप्टरका संयोजक दयाराम पाण्डेले संयुक्त रुपमा विजयीहरुलाई बधाई तथा शुभकामनाका साथ ट्रफि र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कोरोना महामारीकाबीच लकडाउनका कारण विश्व नै ठप्प रहेका बेला इनास ग्लोबलले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा गायनतर्फ राजेश लामा प्रथम, शान्ति राई दोश्रो र डा. विजय गुरुङ तेश्रो हुनुभएको थियो। त्यसैगरी नृत्यतर्फ पूर्ण लामा प्रथम, शेखर घर्तिमगर दोश्रो र सविता मगरले तेश्रो स्थान हाँसिल गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा इनास ग्लोबलका अध्यक्ष कमला दाहालले नेपाली कला क्षेत्रका अग्रजहरुलाई सम्मान र नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै कन्जुस्याईँ नगर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो। इनास सदैव नेपाली कला क्षेत्रको सम्बर्ध्दन र संरक्षणमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हराउन लागेका कला संस्कृति र ओझेलमा परेका कलाकारको खोज इनासको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनु भयो। निकट भविष्यमै काठमाडौँमा इनास भवनको निर्माण गरी कामलाई तिब्रता दिइने जानकारी दिनुभयो। इनास नेपाल च्याप्टरका सल्लाहकार तथा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले इनासले विदेशमा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनका लागि खेलेको भुमिकाको प्रशंशा गर्नुभयो। गायन तथा नृत्य प्रतियोगितामार्फत नयाँ प्रतिभाहरुको खोजी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली चलचित्रलाई यस्ता प्रतिभाहरुको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। इनास ग्लोबलका उपाध्यक्ष अर्जुन काफ्लेले इनासले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो। इनास ग्लोबलका सल्लाहकार लक्ष्मण लम्सालले महामारीकाबीच इनास आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित नभएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। इनास नेपाल च्याप्टरका संयोजक दयाराम पाण्डेले कोरोना महामारीका कारण आँफुहरुले तय गरेका थुप्रै कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। अबका दिनमा इनास नेपाल च्याप्टर सशक्त र सक्रिय भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नृत्य निर्देशक तथा प्रतियोगिताका नृत्य तर्फका निर्णायक राजु शाहले आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमको प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। वरिष्ठ गायक तथा गायन तर्फका निर्णायक प्रदिप बम्जनले प्रतियोगिता मार्फत राम्रा कलाकार अगाडि आएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतियोगिताको गायनतर्फ मीरा राणा, मधु क्षेत्री, सुवास सुन्दास, प्रदिप बम्जन र शर्मिला बर्देवा निर्णायक हुनुहुन्थ्यो भने नृत्यतर्फ राजु शाह, कविराज गहतराज, सरिता हुमागाइँ, जगत खड्का, रामजी लामिछाने र पवित्रा आचार्यले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।
On २४ फाल्गुन २०७७, I ०७:४४ By HTV Khabar
Previous Postकसरी ब्यूँतिएला अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ?
Next Postमाधव नेपालले एमालेभित्रै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्ने